Shirkad Ku Taala Mexico Oo Lafaha Iyo Dambaska Maydka Ka Samaysa Maacuun - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Shirkad ku taala Mexico oo Lafaha Iyo Dambaska Maydka ka Samaysa Maacuun
Shirkad ku taala Mexico oo Lafaha Iyo Dambaska Maydka ka Samaysa Maacuun
Dalka Mexico oo ku yaalla latin America ayaa arin yaab leh laga sameeyay taasi oo ay sheegeen inay ku xusuusanayaan dadkoodii dhintay. Fikradan oo uu curiyay nin dalkaasi u dhashay oo lagu magacabo Keiro taasi oo ah in dambaska dadkooda dhinta markay gubaan ay guryaha ku kaydiyaan ka dibna laga sameeyo weel guryaha lagu haysto oo la isticmaalo si loo xusuusto qofkii dhintay.
Shirkad weelka samaysaa ayaa iyana ka faa’iidasatay fikradaasi iyadoo dambaska iyo lafaha qofkaasi dhintay wixii ka hadhay ay ka samayso weel.
Waxaana la sheegay in lafaha dadka dhinta iyo dambaska ay ku daraan dhoobo waxayna ka samayaan koobab iyo bilaydho. Shirkada ayaa sheegtay in samaynta koobka keliya looga baahanyahan 100 Gr oo dambaska qofka dhintay ah.
Ninkii curiyay fikrardan oo lagu magacaabo Keiro iyo shirkadda hirgelisay ayaa la sheegay in sanadkii tegay 2015 ay iibsadeen 200 lafaha dadka dhinta ah si looga sameeyo weelka. Dad badan ayaa ka soo hor jeestay oo qaarkood ay ugu hanjabeen shirkadda laakiin weli Mr.Keiro wuxu aaminsan yahay in habka loo xusuusan karo qofka dhintay ay tahay iyadoo dambaskiisa laga sameeyo weel guriga lagu haysto. Aadmiga waxa xoolaha ay kaga duwan yihiin caqliga, laakiin wuxu u baahan Iimaan iyo rumaynta Allah si uu u kala saaro wanaagga iyo xumaanta
Previous articleFashilka Ganasiga Maxaa Sababa
Next articleGuddida Doorashooyinka Ceerigaabo oo u kala Dirtay Gadiid Iyo Hawl-Wadeeno Gobolkaas Ka Fulin Doona Wacyigelin.